Runyerekupe rutsva rwunonongedza kudiki shanduko mukugadziridzwazve kweiyo iPhone SE 3 (kana SE Plus) | IPhone nhau
Nezuro raive zuva reMac zvakare, uye isu tatova nepakati pedu macOS Monterrey, iyo nyowani yekushandisa sisitimu yeMac. Iyo iPhone yakagamuchirawo iOS 15.1 neiyo ProRes yeiyo iPhone 13, asi hazvisi zvese zvichange zvichitaura nezve yazvino Apple zvishandiso. Uye kune iyo iPhone modhi ine kutengesa kwayo uye yatinotaura zvishoma nezvayo: iyo iPhone SE. Muenzaniso we Budget iPhone isina premium maficha iyo ndiyo yakakwana yekupinda modhi kune chero asingadi kushandisa yakawanda. Zvino makuhwa anouya kwatiri pamusoro pekuti iyo inotevera modhi ichave yakaita sei, iyo iPhone SE 3, uye zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti ichave modhi ine shanduko shoma ... Ramba uchiverenga kuti isu tinokuudza iwe zvese zvese.
iPhone SE 3, kana iPhone SE Plus runyerekupe, kunyangwe izvi zvine simba shoma sezvo Apple yagara ichibatanidza izwi rekuti Plus nekuwedzera kwehukuru uye mune iyi kesi ndizvo kusahadzika kuti iyo iPhone SE ine kuwedzera. Chinogona kuva nesimba zvikuru ndechokuti Apple haizombochinji dhizaini yechigadzirwa uye pakupedzisira haisi kuzovhura iPhone yakafanana neXR sezvayakataurwa mumavhiki apfuura. Itsva processor, dhizaini yakafanana, uye ine 5G modem izvo zvichaita kuti iPhone iwane kubatana kwe "hama huru."
Naizvozvo tichaenderera mberi ne bhatani repamba rine Bata ID pane mudziyo uyo, kunyangwe ungaite seusingadaviriki, uchiri kutengeswa sezvo kune vashandisi vazhinji vanofarira dhizaini iyi uye vanoda kusarudza yakachipa modhi. Chokwadi, zvinoita sokuti tichatofanira kudaro kumirira 2022 kuti uone kana runyerekupe rwuri rwechokwadi ... Uye kwauri, iwe ungafungei nezve diki kuvandudzwa kwe iPhone SE? Unofunga kuti icharamba ichitengeswa here kana kuti imodhi yakasakara isina basa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Runyerekupe rutsva runonongedza kudiki shanduko mukugadziridzwazve kweiyo iPhone SE 3 (kana SE Plus)
YAMID ESTEBAN akadaro
kana isiri yese skrini inouya, haina kukosha, modhi ine mafuremu uye yekubata ID yatove isingachashandi
Pindura kuna YAMID ESTEBAN